NextMapping | NextKhariidaynta ™ - Kafiloow, Soco & Abuur Mustaqbalka Shaqada
NextMapping™ - Kafilo, Soco & Abuur Mustaqbalka Shaqada
Buug cusubNextKhariidaynta ™ - Kafiloow, soco oo Abuur mustaqbalka shaqada ”Oo hadda la siidaayay oo la heli karo Amazon.
NextMapping ™ wuxuu bixiyaa aalado iyo istiraatiijiyado kugu dardar galin doona adiga iyo ururadaaga kartida aad u leedihiin mustaqbalka shaqada adoo kordhinaya hal-abuurnimo, karti iyo is-waafajin. Iyada oo cilmi baaris ballaaran lagu sameeynayo mustaqbalka shaqada, raadinta la caddeeyay ee guusha macaamiisha iyo labaatan sano ee ahaanshaha mid ka mid ah ganacsatada ugu sareysa adduunka 'u tag' lataliyayaasha Cheryl Cran waxay siisaa siraha lagu beddelayo isbeddeladaha khalkhalka u keenaya fursad iyo faa iido. NextMapping ™ waa moodel la xaqiijiyay oo khariiraya tillaabooyinka kaa caawinaya inaad mustaqbalka ugu lug lahaato mustaqbal hubaal leh adduun aad u deggan oo aan xasilloonayn. Adigoo adeegsanaya mabaadi'da NextMapping ™ model waxaad baran doontaa sida si sahal ah looga fili karo, loo baari lahaa loona abuuri lahaa mustaqbal aad u tiro badan naftaada, kooxdaada iyo shirkaddaada taasoo u horseedda faa'iidooyin tartan weyn.
Akhristayaasha ayaa baran doona:
Isbeddellada ayaa saameynaya mustaqbalka shaqada oo ay ku jiraan dabeecadaha aadanaha iyo tikniyoolajiyada
Saddexda maan ee aad ubaahantahay si aad mustaqbalka u ahaato mid diyaar ah oo ad ubad badashaa
Sida loo akhriyo calaamadaha isbedelka si loo saadaaliyo lagana hor tago xoogagga khalkhalka keena
Sida loo isticmaalo NextMapping™ Qaabka loo abuuro dhaqan diyaarsan mustaqbal iyo shirkad
Calaamadee oo qorshee xeelado muddada-gaaban iyo muddada-dhexe fursadaha koritaanka
Sida loogu dhiirrigeliyo kuwa kale inay isla abuuraan mustaqbalka oo ay 'u horseedaan isbeddelada' in halkaas la gaaro
Waa waajib In- Akhriso Qofkasta Oo Shaqeeya Ama Hogaaminaya Meherad Heerarkasta leh
“Waxaan fursad u helay inaan Cheryl Cran ka maqlo mid ka mid ah muxaadarooyinkeedii sanadkii la soo dhaafay, buugan ayaa ah waxa ku xiga ee ugu fiican qof kasta oo daneynaya mustaqbalka shaqada iyo isbedelka maanta ka socda dunida shaqada iyo tan berrito, maanta. Buuggan waa inay akhriyaan oo ay ka wada hadlaan dhammaan shaqaalaha iyo hoggaamiyeyaasha ganacsatadu heerarka oo dhan, si loo fahmo waxa dhiirrigeliya dhaqammada cusub ee shaqada (millennials iyo Get-Z) iyo sida dhaqammada dhaxalku ugu xirmi karaan uguna beddeli karaan dhaqammada soo socda si loo fuliyo midnimo guud. mustaqbalka shaqada. Buugga waa in looga doodaa kulleejooyinka, Bandhigga Maanta, meel kasta oo laga hadlayo rajada iyo horumarka mustaqbalka shaqada. Cheryl's Infographics dhamaadka cutub kasta oo ka mid ah buuggan waa shaqo qiimaha gelitaanka, kaligeed. Tiknoolajiyadda, dhaqanka bulshada, iyo cilmu-nafsiga ayaa si iskudhac la’aan ah isugu dhex gala sharraxaaddeeda oo macno u sameynaya tacliimeed iyo wax qabad. ”
- Chester M. Lee, Macaamiisha Amazon
Mustaqbalka shaqada, hogaaminta naftaada iyo abaabulka waa halkaan!
“Buugga ugufiican mawduucan mustaqbalka shaqada.
Cheryl waxay bixisaa sheekooyin aad u tiro badan iyo talooyin wax ku ool ah oo haddii aaysan hadda tan akhrin, runti waad ka maqantahay mustaqbalka. Ahaanshaha Gen XI waxaan dareemayaa awood waxaanan hadda ka dib ku tartami doonaa naftayda sidii aan u yeelan lahaa maskax ballaadhan, hal abuur leh iyo dadka ugu horreeya! Waad ku mahadsan tahay Cheryl qorista buuggan oo aan adduunka la wadaageynaa si mustaqbalkeennu u fiicnaado. ”
- Alice Fung, Macaamiisha Amazon
Tilmaamo fiican oo ku saabsan sida loo qorsheeyo loona diyaariyo mustaqbalka shaqada
Aniga oo ah weriye madaxbanaan, waxaan helay buugga NextMapping inuu noqdo hage aad ufiican oo ku saabsan sida loo qorsheeyo loona diyaariyo mustaqbalka shaqada. Waxaan ubaahanahay inaan korka ka ahaado isbeddellada qaabeeya sida ganacsiyada u shaqeeyaan. Buuggan aniga ayuu khuseeyaa oo waqtigiisa ku habboon yahay. ”
- Michelle, Macaamiisha Amazon
Furitaanka Indhaha ee Ganacsiga mustaqbalka
“Buugani wuxuu qabanayaa shaqo la yaab leh oo mustaqbalka soo socota wuxuuna soo bandhigayaa talaabooyin waxqabad leh oo la qiyaasi karo oo loogu diyaar garoobayo isbedelka jawiga ganacsiga. Qoraalka iyo fikradaha waxaa si waadix ah loogu soo bandhigayaa siyaabo akhristaha jecel buugaagta ganacsiga sida aniga oo kale ah u qiimeyn karo. Xaqiiqdii waan kugula talin lahaa hadaad rabto inaad kahortagto curinta hal abuurka. ”
- Keran S., Macaamiisha Amazon
Waxaa i dhiirigaliyay kartida tikniyoolajiyada iyo saameynta togan.
Cheryl waxay leedahay dariiq u gaar ah oo dhiiro galin leh oo ay kula wadaagi karto waxyaabaha ugu hooseeya iyo maamulayaasha darafyada taasoo ka baxsan caqliga kuna xirta dhiirigelinta gudaha. Isla markii aan akhriyay Cutubka 1aad waxaa i jeclaaday oo igu dhiirrigeliyey awoodda teknolojiyadda iyo saamaynteeda togan. Waxaan si gaar ah ugu riyaaqay faahfaahinta cutub kasta taas oo ka dhigaysa mid fudud in la arko dib u soo celinta cutub kasta oo jaleecsan - aad u fiican! Buugani waa mid dhiirigalin u leh mustaqbalka iyo sida hoggaamiyeyaasha, xubnaha kooxda iyo ganacsatadu ay si firfircoon ugu abuuri karaan mustaqbal horumar leh. ”
- Teresia LaRocque, Macaamiisha Amazon
Ma rabtid inaad qortid buugan.
Raadinta mustaqbalka shaqaalaheena waa caqabad aad u weyn. Tani waa akhris cajiib ah oo iftiiminaya. Waxaan aad ugula talinayaa buugan qofkasta oo doonaya inuu kobco oo uu ku guuleysto deegaankiisa. ”
- Christine, Macaamiisha Amazon
Cheryl Cran's NextMapping wuxuu ku siinayaa macluumaad weyn oo ku saabsan isbeddellada qaabeynta labada shaqsi iyo meheradaha ganacsiga. Waan jeclahay sida ay ugu soo dhawaato ugana baxdo. Isbedelada waaweyn, saameynta shaqsiyadeed. Waxaan aad ugu boorinayaa buuggan! ”
- Shelle Rose Charvet, Macaamiisha Amazon
“Xitaa aniga ma ihi ganacsade ama milkiile ganacsi, weli waan ku raaxeystaa buugga waana mid xiisa badan. Akhris wanaagsan! Waxay i siisaa aragtiyo cusub iyo milicsiga jawiga ganacsi ee mustaqbalka dhow. Shaki la'aan, runtii waa hage waxtar leh oo la-talin wanaagsan u leh ganacsatada iyo milkiilayaasha shirkadaha. Si aad ah ugu talin! ”
- Wyatt Sze, Macaamiisha Amazon
“NextMapping” waa fiirinta halka ganacsiga uu ku wajahan yahay adduunka ee AI iyo robotikada ay ka ciyaarayaan doorka sii kordhaya ee ganacsiga. Cheryl Cran waxay soo bandhigaysaa aragti mustaqbal oo aan fogayn. Waxay ka hadlaysaa muhiimada ay leedahay in aad ku sii nagaato cilmi baarista si aad ganacsigaaga ugu sii wadato mustaqbalka aan lumin waqtiyadii hore. Qaabka qoraalka Cran waa mid cad oo soo jiidasho leh. Waan ku riyaaqay akhrinta buuggan waxaanan u arkay inuu yahay mid xog iyo xiiso badan leh. Buuggu wuxuu u qoran yahay hab habaysan oo la fahmi karo oo ka dhigaya mid si fudud loo akhriyi karo oo sawirrada iyo garaafyada lagu daray tan. Runtii aad ayaan uga helay qaybaha saadaalinta iyo sidaad u fakaraysid. Akhris xiiso leh oo dhiirigelin leh. ”
- Emerson Rose Craig, Macaamiisha Amazon
Waa inuu U Akhri Hogaamiyaasha, Kooxaha iyo Ganacsatada
“NextMapping” waa waajib in loo akhriyo hogaamiyaasha, kooxaha iyo ganacsatada si ay diyaar ugu noqdaan mustaqbalka, HADA! Waxaan helay buuggu inuu i siinayo talaabooyin wax ku ool ah waxaanan jeclaaday qaabka PREDICT. Si aad ah ugu talin !!
- HaweenkaSpeakersAssociation, Macaamiisha Amazon
Hubinta guusha mustaqbalka
Inaad karti u leedahay inaad dhex mushaaxdo oo aad ka faa'iideysato mustaqbalka shaqada waxay muhiim u tahay guusha ganacsiga hadda iyo sidoo kale mustaqbalka, iyo NextMapping waxay kaa caawineysaa inaad sidaas sameysid Iyadoo la adeegsanayo tusaalooyinka nolosha dhabta ah, aaladaha, iyo hagidda buugaagta oo si cad u jajabinaya tallaabooyinka la qaadayo si looga faa'iideysto isbeddellada, loona xakameeyo guushaada. Tani ma aha oo kaliya ku saabsan aalado, AI, xogta iyo farsamada. Waa buug ka hadlaya dadka, kooxaha, macaamiisha iyo ganacsiga. Aniga oo ah la taliye iib, waxaan ka helay doodda ku jirta "Mustaqbalka Waa La Wadaagaa" cutubka oo aad u awood badan. Maskaxda shaqaaluhu way wareegaan, qaab cusub oo ganacsi ayaa loo baahan yahay kaas oo saamayn ku yeelan doona shaqaalahaaga iyo macaamiishaada. Iyadoo aan loo eegin jagadaada, suuqa shaqada ama ganacsiga, akhri buugan haddii aad rabto inaad sii wadato koritaanka sannadaha soo socda!
- Colleen, Macaamiisha Amazon
Diyaarinta ganacsigaaga mustaqbalka
Qoraaga buugani wuxuu ku adkaysanayaa in ganacsiyada iyo ganacsatadu ay tahay inay hada u diyaar garoobaan mustaqbalka shaqada maadaama ay isbadalayso natiijada AI, otomatiga, aaladaha casriga ah iyo xawaaraha xawaaraha badan ee isbedelka. Tani waxay macno u leedahay: "NextMapping" waxay gacan ka geysaneysaa in muuqaallada mustaqbalka loo beddelo xalal abuur iyo qorshooyin waxqabad leh oo loogu talagalay 'macaamiisheenna'. Shirkadda la-talinta NextMapping waxay dadaalka ka qaadi doontaa baaritaanka isbeddellada mustaqbalka sidaas darteed waad ka faa'iideysan kartaa waayo-aragnimadooda qiimaha badan. Qoraagu wuxuu si faahfaahsan u eegay saamaynta ay aaladaha ay durba ku leeyihiin qaybaha daryeelka caafimaadka, wax soo saarka, maaliyadda iyo tafaariiqda. Waxay baareysaa qaab nololeedka iyo xulashooyinka shaqada ee dadku maanta sameynayaan si loo saadaaliyo isbeddellada mustaqbalka. Layli xiiso leh iyo akhris wanaagsan. ”
- M. Hernandez, Macaamiisha Amazon
Akhrin Aad U Xiiso Leh
Aniga oo ah milkiile ganacsi oo yar, marwalba aad ayaan uga baqayaa fikirka AI, otomatiga iyo aaladaha casriga ah, laakiin si daacadnimo ah, waxaan u maleynayaa inay tahay wax ay u baahan yihiin dhamaan milkiileyaasha ganacsatadu (nooc kasta ha lahaadeene) inay runti wax ka bartaan, sahamiyaan runti noqo mid ku baraarugsan sida ay faa'iidooyinkaasi u saameyn karaan meheradooda ganacsi. "Khariidaynta Next: Sug, Navival & Abuur Mustaqbalka Shaqada" si cad oo qeexan ayuu u jabayaa mustaqbalkan ganacsiyada qaab runti indhaha u furaya oo runtii waa waajib in loo akhriyo dhammaan ganacsiyada, xitaa kuwa sheeganaya inaysan waligood jeclaan doonin ku dar robotikada, AI ama otomatiga shirkadooda. Buugani wuxuu aakhirka beddeli doonaa fikirkaaga. ”
- Amy Koller, Macaamiisha Amazon
Buug ka buuxa macluumaad qiimo leh
“Tani runti waa akhrin kooban laakiin waxay ka kooban tahay talo iyo istaraatiijiyad weyn ganacsatada, milkiilayaasha shirkadaha iyo hogaamiyaasha si ay ugu diyaar garoobaan mustaqbalka ganacsiga isla markaana ay uga sii horeeyaan ciyaarta si ay u sii wataan guulaha xitaa marka ganacsigu noqdo mid otomaatig ah. Sida freelancer, waxaan dareemayaa sida buugani iiga caawin doono inaan sifiican isu diyaariyo oo aan la socdo sida ganacsiyada ay isu badali doonaan una kori doonaan. Ka qof ahaan sidoo kale u shaqeeya shirkad yar Buugani wuxuu iga caawin doonaa inaan miiska u soo saaro macluumaad qiimo leh oo labadaba ka caawin doona shirkadeena inay kobciso sidoo kale waxay iga caawineysaa inaan sidoo kale ku koro shirkadda. Waxaan dareemayaa in buuggan ay tahay inuu akhriyo qof kasta oo dareemaya mustaqbalka ganacsigiisa inuu ku xiran yahay sii joogista iyo qorshaynta meesha uu ku sii kobcayo ganacsiga xiga! ”
- Shanell, Macaamiisha Amazon
Robotyadu way imanayaan! Laakiin taasi ma noqon karto wax xun…
“Horusocodka kaliya ee aaladaha AI-ay gacanta ku hayaan iyo softiweerku siyaabo badan ayey u xiiseeyaan, laakiin sidoo kale waxay leedahay macno aad u macquul ah iyo codsiyo. Aay waxay isbedel ku sameyn kartaa sida aan ku nool nahay tobanka ilaa labaatanka sano ee soo socota, iyo maadaama aan qeyb muhiim ah ku qaadaneyno nolosheena shaqeynta, isbeddelada waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan suuqa shaqada iyo bay'adaha shaqada sidoo kale.
Way fududahay in la iska indhatiro kacaanka tikniyoolajiyada oo ah wax aan dhici doonin dhowr iyo toban sano oo kale, laakiin runtu waxay tahay, horay ayey u dhacday oo saameyn ku yeelaneysaa nolosheena, iyo sidoo kale shaqeynta ganacsiyo badan. Inta badan iibiyaasha DVD-ga waligood ma arkin Netflix oo soo socda, Uberna hada erey qosol leh uma ahan dhamaan darawallada tagaasida ee lumiyay qayb muhiim ah oo ka mid ah dakhligooda taas oo ay ugu wacan tahay barnaamijka casriga ah. Haddii aad tahay milkiile ganacsi oo yar ama maamule guud ee shirkad weyn, waxaad u baahan tahay inaad ka feejignaato isbeddelada ay keeneen AI isla markaana aad qorsheyso tallaabooyinkaaga dheeraad ah si waafaqsan haddii aad rabto inaad weli guuleysato muddo toban sano ah. ”
- Rev. Stephen R. Wilson, Macaamiisha Amazon
Buug war badan leh!
"Nextmapping" waa buug bixiya istaraatiijiyado iyo fikrado ku saabsan sida loo diyaariyo dadka iyo ganacsiyada si ay ula qabsadaan wejiga sida dhaqsaha badan isu beddelaya ee sirdoonka macmalka ah, otomatiga, iyo robotikada. Buuggu waa mid aad u qaabeysan oo ay u fududahay akhristaha inuu arko in qoraagu runtii khibrad fiican u leeyahay uuna si fiican u fahmay mawduuca. Qoraagu wuxuu sooqaatay tusaalooyin badan oo nolosha dhabta ah ah iyo daraasado kiis si akhristaha looga caawiyo inuu fahmo muhiimadda weyn ee ay leedahay in si dhaqso leh loola qabsado isbeddelada degdegga ah ee tikniyoolajiyadda ee saameynaya dhammaan dhinacyada nolosheena. Waxa aan buugga ugu jeclahay waa soo gaabinta PREDICT oo ka caawisa akhristaha inuu sii odoroso mustaqbalka oo si fiican ugu sii diyaar garoobo. Buuggan kaliya looguma talagalin milkiileyaasha ganacsiyada iyo hoggaamiyeyaasha shirkadaha ka walaacsan dhisidda ganacsi u adkeysan kara isbeddelka xilliyada. Buuggan sidoo kale waa mid wargelin badan leh oo ka faa'iidi doona qof kasta oo aan doonaynin in looga tago hirarka isbeddelka farsamada. "
- Faith Lee, Macaamiisha Amazon
Loogu talagalay dhagaystayaasha bartilmaamedka ah iyo waxyaabaha xiisaha leh ee dhammaan akhristayaasha.
Ka dib afgembigii caadiga ahaa, buuggu wuxuu ku furmay ereyo ku saabsan qoraaga, Hordhac iyo saddex qaybood oo shaqsi ah. QAYBTA KOOWAAD wuxuu ka kooban yahay 2 cutub, tan ugu horeysa oo sharraxaysa "Mustaqbalku hada WUXUU JIRAA" wuxuuna weydinayaa "Diyaar ma u tahay?" wixii ku saabsan boodhadhkii hore ee la bilaabay, aaladaha aan duuliyaha lahayn, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'AI' iyo noocyada kala geddisan ee fikradaha fikirka ee ku saabsan shaqaalaha cusub ee shaqaalaha ah ee ay tahay inaad wax ka qabato. Cutubka Labaad - "Mustaqbalka, Saadaalinta Mustaqbalka - Habka Saadaasha" wuxuu sharxayaa halka ay tahay inaad go'aan ka gaartid goorta iyo sida ay waxyaabahaani u saameyn doonaan ganacsigaaga. QAYBTA LABAAD waxay ka kooban tahay 3 cutub oo baaraya "Mustaqbalka Shaqada." Midka hore (Cutubka Saddexaad) "Maskaxda Navigator ee Mustaqbalka Shaqada" wuxuu si gaar ah u sharaxayaa waxa tani u baahan doonto inay ahaato. Cutubka Afaraad, "Mustaqbalka Waa La Wadaagaa" wuxuu sharxayaa sida maskaxda shaqaalaha cusub uga duwanaan doonto kuwii hore ee daruuriga u ahayd gebi ahaanba qaab cusub. Shan, “Raadinta Caqabadaha Maanta - Maxaa Xiga” ayaa baaraya waxyaabaha jira iyo kuwa mustaqbalka. QAYBTA SADDEX waxay ka kooban tahay cutubyada 6 iyo 7 oo sharraxaya shuruudda buuxda ee loo abuurayo 'Dhaqanka Aamminaadda' ee ka dhex jira xoogga shaqada si loola kulmo mustaqbal aadamnimo oo leh Robotyo, AI iyo otomatig. Cutubka ugu dambeeya wuxuu xooga saarayaa Maareynta "Abuur Mustaqbalkaaga Shaqada lana Wadaag Mustaqbalka Aad Abuureyso". Liiska “Kheyraadka” iyo Tusmo waxtar badan ayaa soo gabagabeynaya buugga.
Doodda: Tani waa mid kale oo ka mid ah buugaagta tirada badan ee u muuqda kuwa caawiya Milkiilayaasha ganacsiga, agaasimaha guud, COO et al. iyadoo wajahaysa saameynta arrimo badan. Aaladda otomaatigga ah ayaa heshay feejignaantii ugu ballaarneyd ilaa taariikhda sababta oo ah kororka foosha xun ee xogta oo horeyba u ahaa dhibaato weyn oo sii kordheysa oo leh buugaag dhowr ah oo loogu talagalay baahida loo qabo in la ballaariyo Cloud iyo fursadaha lagu horumarinayo Quantum Computers. In yar ayaa diiradda saaray culeyska shaqsiyeed iyo ka qeyb qaadashada dhinacyada shakhsiyadeed ee jiilasha kala duwan. Qoraagan ayaa si wada jir ah u soo jiiday maqaalkan dambe, isagoo umuuqda inuu xoogaa kayaryahay kuwa kale ee aan aqriyay, wuxuuna sharaxay kaliya kala duwanaanshaha astaamaha ee soo-galootiga cusub ee ka imanaya kuwa ay ku badalayaan xoogaga shaqada, laakiin xiriirka ay la leeyihiin dhaqsaha u koraya meelaha aalado. AI iyo otomaatiga. Sida buugaagta badankood ee ay qoraan macallimiinta joogtada ah, waxaa jira soo noqnoqosho badan oo aan la iska indhatiri karin sababtoo ah adeegsigeeda 'si dhib loo helo'. Iskusoo wada duuboo, wax ku biirinta ugu mudan ee shuruudaha aqoonta kordhaysa ee ganacsiga si loogu noolaado adduunkan isbeddelaya. Kaas oo u keenaya fikrad xiiso leh akhristahaan. Lasocodka joogtada ah ee uu ubaahan doono qof xoogaa jago ah si loo hubiyo kalsoonida qayb kasta oo ka mid ah 'kooxaha'. Marka ay kooxaha cusubi go’aamada gaarayaan, shaqsi keliya oo aan loo hurin ayaa keeni kara natiijooyin aan loo baahnayn isaga oo maskaxda ku haya maahmaahdii hore ee ahayd - Geela waa faras ay guddi u naqshadeeyeen.
- John H. Manhold, Macaamiisha Amazon
“Buugga cusub ee Cheryl wuxuu akhris muhiim u yahay xirfadle kasta oo firfircoon oo doonaya inuu tallaabo qaado oo uu qaato mustaqbalka shaqada. Waxaa taageeraya isbeddellada ugu dambeeyay iyo xogta qiimaha leh ee si taxaddar leh u falanqeynaya isbeddelada lama filaanka ah ee saameynaya mustaqbalka shaqada, buuggan wuxuu aalad qiimo leh u yahay qof kasta oo doonaya inuu barto sida loo odoroso, mustaqbalkana ula socdo guul sii kordheysa. ”
Qeyb ka mid ah doorka qofka ee agaasime guud, waa inaad awood u leedahay inaad hogaamiso ururkaaga, iyadoon loo eegin jawiga dhaqaale, si aad ula qabsatid isbadal dhaqsaha leh oo joogto ah iyo isbadal farsamo, oo ay weheliso ka mira dhalinta. Buugga Cheryl wuxuu siinayaa daraasad heer sare ah oo ku saabsan ururada mustaqbalka waa inay rajeeyaan, sidoo kale waxay siisaa xirfadaha loo baahan yahay si loo kobciyo isbeddelada mustaqbalka ee looga baahan yahay ururkaaga. ”
- Walter Foeman, Karaaniga Magaalada, Magaalada Coral Gables
Waxaan aqaanay Cheryl Cran sanado badan shirkaddeena waxay u isticmaashaa daraasadeeda si ay si joogta ah u falanqeyso hadii aan ku shaqeyneyno maskax maalinle ah oo diirada saareysa koritaanka iyo fidinta. Iyada oo loo raacaya NextMapping, Cheryl waxay siineysaa bulshada ganacsatada ah aaladda ay ugu diyaarinto ururadooda mustaqbal mustaqbal halka dabeecadaha iyo teknolojiyaddu ay iskaga gudbi doonaan qaabab aan qofna ku qiyaasi karin 20 sano ka hor. ”
- John E. Moriarty, Aasaasihii & Madaxweynaha, e3 La-taliyeyaashaGROUP
“NextMapping” waa waajib in loo akhriyo hoggaamiyeyaasha iyo xirfadleyda ka shaqeysa dhammaan warshadaha. Maaddaama adduunyada shaqadu si xawli ah u socoto oo aan la saadaalin karin, shakhsiyaadka iyo ururadu waa inay noqdaan kuwo aad u dhaqso badan oo la jaanqaadi kara inay ahaadaan kuwo ku habboon. Cheryl waxay soo bandhigaysaa indho fur furan mustaqbalka shaqada iyadoo la socota isbeddelada iyo tusaalooyinka ku saleysan cilmi baarista waxayna akhristayaasha siisaa talooyin wax ku ool ah oo lagu dhisayo kartida isbedelka muhiimka ah. ”
- Liz O'Connor, Maamulaha Isku-xidhka, Kooxda Daggerwing
“NextMapping-ka waa mid firfircoon! Haddii aad tahay hoggaamiye ganacsi oo raadinaya istaraatiijiyado aad ugu wareejiso hay'addaada heerka ku xiga, buuggan ayaa adiga loogu talagalay. Waan ku faraxsanahay sida daacadnimada leh ee Cheryl ay u wajahday cilmi-baaristeeda ay u horseedday kalsoonideeda dhagaystayaasheeda. ”
- Josh Hveem, COO, Isgaarsiinta OmniTel
Cheryl Cran waa af-hayeen iyo qoraa wacdaro ku dhiirrigeliya hoggaamiyeyaasha inay arkaan wixii ka dambeeya mustaqbalka dhow isla markaana ku dhiirrigeliya hoggaamiyeyaasha inay maraan caqabadaha si ay u gaaraan himilooyinkooda. NextMapping wuxuu adeegsadaa xogta ku habboon si loo caddeeyo jihada wuxuuna bixiyaa talo wax ku ool ah oo mustaqbalka looga dhigayo mid dhab ah. Meel shaqo iyo jawi bulsheed oo isbeddelku xawaareynayo xeerarkuna isbeddelayaan, aragtidan cad iyo waddada mustaqbalka shaqada marna lagama maarmaanka u ahayn. ”
- Suzanne Adnams, Cilmi baaris VP, Gartner
“Buugani waa safar loogu socdo mustaqbalka ganacsiga iyo hoggaaminta. Waa isdhexgal qurux badan oo xikmad abaabul iyo badbaadiye ganacsi oo leh aqoon qoto dheer iyo fahamka dabeecadda aadanaha iyo sida nidaamyada nololeed ee adag ay u shaqeeyaan. Waxa layaabka leh ayaa ah qaabka ay qoruhu u muujinayaan iswaafajinta inta udhaxeysa waxa ay qorayo iyo waxa ay tahay. Wadaagista aragtideeda ku saabsan sida loo abuuro mustaqbal diyaar u ah shirkad iyo shirkad waxay soo bandhigeysaa doorka hogaamiyaha isbadal doonka ah si bayaan ah ayaa looga hadlay oo si wanaagsan loogu sharaxay buuga. Shaqo-beddelasho shaqo oo akhristaha u keeni doonta caddayn cusub, dhiirrigelin iyo rabitaan waxqabad.
- Danilo Simoni, Aasaasihii iyo agaasimihii shirkadda 'Bloom'
“Marka ay timaado hagidda mustaqbalka Shaqada, Nextmapping waa nal iftiin leh. Waxay naga caawineysaa inaan iska ilaalino caqabadaha dhagxaanta aan la arki karin intaan u jaan goynayno dariiqa ugu toosan meelaha aan u socono, goobaha shaqada ee wax soo saar leh. Waxqabad la'aantu maahan wax door ah maadaama isbadalku uu dhamaanteen nagu wareegsan yahay - shaqada Cheryl waxay siinaysaa hogaamiye kasta kalsooni uu ku hogaamiyo naftooda iyo kuwa kaleba.
- Christine McLeod, Hogaamiyaasha Maalinlaha ah, Fududeeyaha Hogaanka & Lataliyaha
Qaybta 1 Falanqeynta
Cheryl Cran waxay la wadaagaysaa fiirinta Cutubka 1aad ee buuggeeda cusub, "NextMapping-, Ka-fiirso, Abuurna Mustaqbalka Shaqada" oo ay tahay bisha Febraayo 2019.
Qaybta 2 Falanqeynta
Cheryl Cran waxay si dhakhso leh ula qaybsaneysaa Cutubka 2aad. Waxay ku saabsan tahay sida loo adeegsado aqoonsiga qaab-dhismeedka iyo isbeddellada ku dhaca hab-dhaqanka aadanaha si loo sii wanaajiyo loona qorsheeyo mustaqbalkaaga hogaamiye, xubin kooxeed, ganacsade ama urur.
Qaybta 3 Falanqeynta
Cutubka 3 wuxuu diiradda saarayaa sidii loogu sii socon lahaa mustaqbalka leh mustaqbal wanaagsan iyo maan badan. Awoodda lagu hayo fikradaha dhabta ah ee jira iyo mustaqbalka si loo abuuro natiijo mustaqbal oo cusub.
Qaybta 4 Falanqeynta
Cutubka 4 wuxuu diiradda saarayaa mustaqbalka waa la wadaagaa, wadaagida dhaqaalaha iyo hoggaanka la wadaago. Millennials iyo Gen Z waxay rabaan inay ka shaqeeyaan goob shaqo oo furan oo furan.
Qaybta 5 Falanqeynta
Cutubka 5 diiradda ayaa saaran sahaminta caqabadda isbeddelka dijitaalka ah, helitaanka iyo haynta dadka wanaagsan, iyo sida shirkadaha ay u xallinayaan caqabadaha qaarkood. Caqabadaha ayaa u baahan xalal cusub oo hal abuur leh.
Qaybta 6 Falanqeynta
Cutubka 6 wuxuu ku saabsan yahay sidii loo abuuri lahaa isbedelka aad u baahan tahay inaad lahaato dhaqan aamin ah. Baahida loo qabo hogaamiyaasha inay abuuraan dhaqan hufan oo ay kooxahani dareemi karaan amaan si ay u curiyaan, u wada shaqeeyaan una bedelaan.
Qaybta 7 Falanqeynta
Cutubkani wuxuu diiradda saarayaa mustaqbal aadanaha aad u weyn oo ku saabsan da'da robotics, AI, qalabaynta iyo robotics. Shaqaalaha raadinaya nolol dheeraad ah iyo goob shaqo. Tan macnaheedu waa in diiradda la saaro macmiilka iyo khibradda shaqaalaha oo ah diiradda sare iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda taageeraysa SIDII aan u abuuri lahayn waayo-aragnimo bini aadamnimo oo dheeraad ah
Qaybta 8 Falanqeynta
Cheryl Cran waxay la wadaageysaa aragti horudhac ah oo ah Jabtarka 8 ee buuggeeda cusub, NextMapping- Anticipate, Navigate and Create Mustaqbalka Shaqada. Wax walba way isu yimaadaan oo ay ku jiraan hannaanka NextMapping si looga caawiyo hoggaamiyeyaasha, kooxaha iyo ururradu inay hadda diyaar u noqdaan hadda.
Cheryl Cran waa mustaqbal #1 ah oo saameyn ku leh shaqada, oo ah la taliye sare oo caalami ah isla markaana loo magacaabay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu sarreeya hoggaanka Waqooyiga Ameerika. Iyadu waa qoraa toddobo buugaag ah oo ay ku jiraan, "Farshaxanka Hogaaminta Isbedelka - Wadida Isbedelka Dunida Deg Degga".
Iyadu waa lataliye si aad ah loo doondoonto oo ka caawiya hoggaamiyeyaasha, kooxaha iyo ganacsatada sidii loo abuuri lahaa, kor loogu qaadi lahaa karti iyo hoggaaminta mustaqbalka shaqada xawaaraha isbeddelka. Shaqadeeda waxaa lagu soo qaatay Washington Post, Huff Post, Metro New York, Magazine ganacsade, iyo inbadan.